यी युवकका बिषयमा केहि नभन्नुहोस् नत्र तपाईले जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ! « Rara Pati
एजेन्सी । संसारमा धेरै अनौठा व्यक्तिहरू छन् । जसको बारेमा तपाईंले सुन्नु भएको वा पढेको हुन सक्छ। आज हामी तपाईलाई यस्तै अनौठो व्यक्तिको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । हो, हामी जोनाथन ली रिचेसको बारेमा कुरा गर्दैछौं । यीनका कुराहरु थाहा पाएपछि तपाई पनि भन्नुहुनेछ कि कस्तो अनौठो मान्छे हो । जो वास्तवमा संसारमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा लड्ने व्यक्ति हो । यी युवकले आफ्नो आमा विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए।
त्यो मुद्दामा, उनले भने, ‘उनकी आमाले उनलाई राम्रोसँग हुर्काउनुभएन ।’ उनले मुद्दा पनि जिते र बीस हजार डलर क्षतिपूर्ति पाए । मुद्दा जितेपछि युवकले आफ्ना साथीहरू, सल्लाहकारहरू, छिमेकीहरू, आफन्तहरू, आफन्तहरु, प्रहरी, न्यायाधीशहरू, प्रसिद्ध कम्पनीहरू र जर्ज डब्लु बुसमाथि मुद्दा हालेका थिए । हालसम्म उनको तर्फबाट विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाको संख्या २६ सय नजिक पुगेको छ ।
जोनाथन ली रिचेसको नाम गिनिज बुकमा पनि लेखिएको कुरा थाहा पाउँदा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । उनले, जोनाथन ली रिचेसले पछि गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा मुद्दा हालेको कुरा थाहा पाउँदा तपाईलाई अझ अचम्म लाग्न सक्छ । उनले आफ्नो अनुमति बिना किताबमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन किन लेखियो भनेर सोधे । हालसम्म परेका मुद्दामा उनले झण्डै आठ लाख डलर क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्ति जितिसकेका छन् ।
यति भएपछि उनलाई एउटा टिभी कार्यक्रममा बोलाइएको थियो जहाँ उनलाई सोधिएको थियो, ‘यति धेरै प्रसिद्धिपछि पनि तिमी एक्लै बस्ने र माया गर्ने कोही नभएको कारण के हो ? यो सुनेर उनी हाँस्न थाले र त्यसपछि टिभी शो छोडेर उठे । त्यसपछि युवकले टिभी च्यानलमाथि अपमान गरेको भन्दै मुद्दा समेत हालेका थिए । त्यो टिभीबाट उनले पचास हजार डलर क्षतिपूर्ति पाए ।